Uma ufuna ukwenza umngane wakho omuhle noma umlingani webhizinisi isipho esihle, khona-ke ungavakashela izitolo ezimelela iMoscow Jewelry Factory kumadolobha amaningi aseRussia. Ukubuyekeza kwalo ngokuvakashelwa komuntu siqu kungenziwa izakhamuzi zendawo ezinjengeMoscow, iNovosibirsk, iSt. Petersburg, i-Omsk, i-Nizhny Novgorod, i-Ekaterinburg, i-Samara, i-Ufa, i-Chelyabinsk, i-Kazan, i- Rostov-on-Don, iVis, iVolgograd, i-Krasnodar, i-Krasnoyarsk Futhi amanye amadolobha namadolobha angu-67. Abamele bezinye izifunda bangakwazi ukuthenga nge-intanethi.
Lapha konke kulula. Ikhasimende lidonsa umyalelo ngewebhusayithi yesitolo, emva kwalokho ukuthengiswa kulethwe esitolo eseduze esitolo senethiwekhi noma ngqo endlini. Kwezinye izimo, ungamane unikeze imali umthumeli, kwabanye - udinga ukukhokha kusengaphambili imali engama-20%, okulandelayo okuhlanganiswa nezindleko zezimpahla. Ukuqhutshwa kwemithetho kwenziwa ngumnyango wethu wenkonzo, ophethe iMoscow Jewelry Factory. Impendulo mayelana nokulethwa yiyona enhle kakhulu, okungukuthi, inkampani iletha lokho okuyiyalile, futhi ngokuhamba kwesikhathi.
Uma kwenzeka wena kanye nezintombi zakho zithanda ubucwebe ezenziwe ngamatshe ayigugu nezinsimbi, mhlawumbe kufanele uhlangane futhi uthenge ndawonye. Lokhu kuzovumela ukusebenzisa izinhlelo zokuphumula ezihlinzekwa yi-Moscow Jewelry Factory. Impendulo ibonisa ukuthi ungathola izaphulelo kuze kube ngu-30% wamanani (ngaphandle kwenani lezinto ezifana namawashi noma amadayimani aqinisekisiwe). Ngaphezu kwalokho, kukhona izaphulelo ekuthengeni okukhulu.
Kukhona iqembu elikhethekile labathengi abafanele futhi ukuvakashela eMoscow Jewelry Factory. Izindandatho zomshado ziyizindwangu ezithengwa kwenye yezinsuku ezijabulisayo kakhulu ekuphileni kwethu futhi zihlale zigqoke. Esikhathini esitolo se-intanethi kanye nezokungcebeleka ezitsheni ze-plant, abashadikazi abasanda kushada bangathola izimpawu zomshado ezinhle ngokufaka idayimane. Kukholelwa ukuthi uma lamatshe efika kumuntu ngendlela yesipho nasuka enhliziyweni, aba ngama-originalalism, avikela ekuhluphekeni futhi alethe inhlanhla.
Kufanelekile ukunaka iqembu lemikhiqizo, elinikezwa emakethe yamanje ngambalwa, kuhlanganise noMoscow Jewelry Factory. I-crystal crystal - yilokho ongayithenga kulolu chungechunge lobucwebe. Inani lentengo eliyigugu lihluka kusuka ku-120 000 (isisindo 0.76, ukuhlanzeka oku-7, umbala wesi-5) kuya kumaruble wezigidi eziningana (umbala nokuhlanzeka - 3, isisindo 2.0). Amadayimani atholakele angathunyelwa kunoma yiluphi uhlobo lensimbi, athola igolide elikhethekile noma umhlobiso weplatinum.
Futhi, abaningi bagubha uhlelo lokuqinisekisa isitifiketi esithakazelisayo, oluqaliswa yi-Moscow Jewelry Factory. Amazwana ezinhliziyweni zabantu abasondelene nawe mayelana nomuntu wakho azoba yinto enhle kunazo zonke, uma ubahambisa ngesitifiketi sesipho sokuthengwa kwezingubo eziyigugu. Lokhu kuyinto ephawulekayo ngempela, ngoba isancinza singaya esitolo sisodwa bese sikhetha usayizi ofanele, imodeli, njll. Namuhla, inkampani yokugqoka inikeza izitifiketi zemali eyi-ruble eyizinkulungwane eziyikhulu, evumela ukuba basebenzise izakhiwo ezibanzi kunazo zonke.
Inzuzo - inkomba yokuthi ukusebenza kwanoma iyiphi inkampani
Chimneys "isangweji": kuyini futhi yiziphi izici zawo?
Sibhedlela "Magadan": ukubuyekezwa. "Magadan" (resort, Sochi): incazelo, izimo, izithombe